एनआरएन अमेरीकामा गुण्डाहरुको राज, यसरी लुटीएका छन नेपालीहरु | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
एनआरएन अमेरीकामा गुण्डाहरुको राज, यसरी लुटीएका छन नेपालीहरु
यस्ता छन, सच्चिका पक्षका फेसबुक स्टाटस
प्रकाशित मिति २८ माघ २०७५, सोमबार १८:३७ लेखक नेपाली जनता
काठमाडाैं । एनआरएनका वर्तमान प्रवक्ता बिनोद कुमार तिवारी लगाएतले पत्रकार सच्चि मैनालीलाइ धाक धम्की दिएर उनले संचालन गरिरहेकाे “सच्चिका साथमा” फेसबुक पेज लाइभ क्रार्यक्रम नै बन्द गर्ने निन्दनीय कार्य गरेकाे समाचारले यतिखेर प्रवासी नेपाली अमेरीकनहरू दुइ ध्रवमा विभाजित भएका छन ।
त्यति मात्र हैन तिवारीकाे नेतृत्वमा केहि आवारा गुण्डाहरुहरुको सहयोगमा उनीहरूले के के गरे सच्चिकै शब्दमा “एउटा गुटका बिचौलियाहरूले सांगठनिक घेराबन्दि गरेर बिभिन्न रूपमा आक्रमण गरीरहेका छन् । पहिले उनीहरूले FAKE Facebook ID बाट सुरू गरे जब मैले त्यो भण्डाफोर गरें त्यसपछि केहि अगाडि आएर फेसबुकमा कमेण्ट मार्फत कोशीस गरे त्यहॉ पनि मेरो जवाफले चुप भए । त्यसपछि एउटा group नै मिले र मेरो कार्यक्रम अमेरिकाका अन्य पत्रकारको भन्दा कयौं गुना बढि हेरीने भएकोले फेसबुकले नबुझ्ने नेपाली भाषाको सहायता लिएर बिभिन्न ठाउँबाट report गर्दै बन्द गराउन थाले ।” उनले नेपाली जनतासँग कुराकानीमा बताएकि हुन ।
सच्चिले फेसबुकबाट गरिने लाइभमा उनीहरूले के के गरे, ‘ईनेपलिजको फेसबुकबाट लाईभ गर्दा गर्दै ३ पटक लाईभ बन्द भएपछि मैले आफ्नो ब्यक्तिगत एकाउण्टबाट सानो लाईभ गरेर जानकारी गरॉए । मलाई खुलेर support गर्नेहरू मध्य १ जनाको त धेरै जना लागेर बन्दै suspend नै गराए , अरू सपोर्टरहरूकोमा पनि समस्या आएको आज जानकारी पॉए । सच्चीको साथमा कार्यक्रम लोकप्रिय हुनु र त्यसमा पनि पछिल्लो समयमा उक्त कार्यक्रमबाट राखिएको एनआरएनको बिषयमा Public Voice बाट आएको आवाज र हाम्रो कार्यक्रमको प्रभावकारीता निकै बढेपछि यो आक्रमण सुरू भएको हो ।” सच्चिले नेपाली जनतालाइ वताएकि छन ।
एनआरएन जस्ताे प्रवासी नेपालीका लागि भनेर विदेश खाेलिएकाे संस्थाका पदाधिकारीबाट तड्रपिदै बस्नु परेकामा दुःख पाेख्दै भन्झीन, “मैले “म यसपटक NRN अमेरिकाको सदस्यता लिंदिन” भनेर status लेखेपछि यसले झनै उग्र रूप लिएको हो । अहिले त १/२ जना होईन पुरै गुट लागेका छन् । यिनीहरूको गुण्डागर्दीले यहॉ धेरैलाई रूवाएको छ तर कोहि खुलेर बोल्न सक्दैनन् । पछाडि मात्रै कुरा गर्छन् । यिनीहरूले ५/१० जना मिलेर र केहि मान्छेहरूबाट प्रायोजन गरेर केहि नेटवर्क पनि तयार गरेका छन् । NRN अमेरिकामा त आफै उमेदवार भएकाले पनि भोट दिन पॉउँदैनन् । म हजुरलाई त्यसको लिंक पठाईदिन्छु । जसले जति मै हुँ भन्ने मर्द भनॉउँदाहरूपनि यिनीहरूको अघि बोल्न सक्दैनन् बरू केहि आम मान्छेहरूले खुलम खुल्ला #WeareWithSachchi भनेर status हरू आईरहेको छ ।” उनीहरूसँग किन मानिसहरू डराउँछन भन्दा अमेरीकामा बस्ने साधारण मानिसहरूले एनआरएनका पदाधिकारीहरूबाट अनावश्यक दुःख पाउनु भन्दा नबाेल्नु नै राम्राे भन्ने कुरा एक जना नेपाली प्रवासीले खुलासा गरेका हुन ।
अमेरीकामा हुने एनआरएनकाे चुनावकै विषयलाइ लिएर भएकाे विवादमा धेरैले वाेल्ने हिम्मत गरेका छैनन । सच्चिले खुल्लारूपमा लेख्दा समेत काेहि बाेलेका छैनन किन ? “अब हुने चुनावमा उनीहरूकै कब्जा हुने कुरा खुलमखुल्ला लेख्दा पनि यहॉ केहि आम मान्छे बोल्छन् तर धेरै चुप छन् । त्यहि गुटले बिभिन्न नामबाट FAKE Facebook ID बनाएर धेरैलाई हत्तु बनाएका छन् ।” अब चुनावको बेलामा त यिनीहरू अझै उग्र हुन्छन् । मैले नेपालमा भ्रष्टाचार , ढिलासुस्ती, अनियमितता बिरूद्द पत्रकारिता गर्दा धेरै risky reporting हरू गरें तर यस्तो गुण्डागर्दी देखेको थिईन ।”
“यहॉ धेरैको संघर्षशील जीवन हुन्छ तर यिनीहरूलाई भने आंशिक रूपमा पालेर राख्ने भएकाले पनि होला । हुनत म पनि चुपो लागेर बसेत यो सबै झेल्नु पर्दैन तर संचारकर्ममा छु । कसैको प्रवक्ता बन्न मन लाग्दैन । यहॉ हाम्रो समुदाय र संस्थाहरूमा भएको बिकृतिहरू देखिसकेपछि नबोली मन पनि मान्दैन । हजुर आफै सोच्नुन Greater Austin Nepali Society GANS का अध्यक्ष Devaraj Neupane लाई धम्क्याउँदा त मलाई फोन गर्नुभयो ।”
किन होला ? “किनकि म कसैलाई अन्याय गर्यो, थिचेमिचो गर्यो भने जो कोहि भएपनि त्यसको बिरूद्द आवाज उठाउँछु । मलाई के होला । कताबाट असर पर्ला भनेर सोच्दिन । त्यसैले म संग धेरैले शेयर गर्छन् । यहॉ नेपालीबाट ठगीएकाहरू देखि लिएर , husband पीडित देखि लिएर , अमेरिका ल्याईदिन्छु भनेर ठगीएका देखिले सहयोग मागेर फोन गर्छन् तर कतिलाई प्रमाणको कमिले त कतिलाई बिभिन्न अन्य कारणले म आफैले सहयोग गर्न नसकेपनि म यहॉका सोहि बिषयका सम्बन्धित संघसंस्थामा पठाईदिएर, contact गराईदिएर सहयोग गर्छु भने कतिलाई चिनेको र नजिकको ब्यवसायीहरूको सहयोगमा हाम्रै state मा ल्याउने ब्यबस्था मिलाईदिएर सहयोग गर्छु ।” सच्चिले गरेका मानवहितका कामले अमेरीकामा पनि ठगिखाने नेपालीहरूकाे राेजीराेटि खाेसीएकाे कुरा सच्चिले नै खुलासा गरेकि छन । यस विषयमा लामाे समय अमेरीका बसेर हाल नेपालआएका एक पत्रकारले समेत सच्चिले उठाएका विषयलाई जोडदारसँग उठाएका थिए ।
अमेरीकामा बसोवास गर्ने नेपालीहरुलाई नेपालीहरुले चुसीरहेका छन । उनीहरुसँग केश गर्दै गरेका र लिगल हुन नसक्नेहरुलाई एनआरएनका पदाधिकारीहरुले कति चुसेका छन त्यो वाहिर आउनै सकेको छैन ? यो सब देखेकी एक पत्रकारको आँखा, मुख र हातखुट्टा नै बन्द गर्ने हर्कत चलिरहेको छ । “अमेरिका हो यहॉका पीडितहरूको आफ्नै कथा छ । यो सबै देखेपछि कसरी चुप लाग्नु ? त्यसैले धेरैको प्यारो पनि भएको छु र केहिको तारो पनि भएको छु । तर संचार माथी नै धावा बोल्दा यहॉका पत्रकारहरू चुप देख्दा भने पत्रकारिता देखि नै घृणा लाग्छ । तर आज INJA अन्तराष्टि्रय पत्रकार संघला बिज्ञप्ती जारी गरेको थाहा पाएको छु । हजुरलाई पठाईदिन्छु ।”
सच्चिका विरोधी मात्र हैनन सहयोगीहरु पनि छन ? हेर्नुहोस सच्चिका सहयोगहरुको आवाज
ओभरटेक गर्न खोज्दा दुर्घटना, ३ जनाको मृत्यु
काठमाडौं । सुनसरीको धरानमा गएराति सवारी दुर्घटना हुँदा ३ जनाको मृत्यु भएको छ भने ५ जना घाइते भएका छन्…
प्रहरी हिरासतमै पूर्वासांसद बिरामी, पाटन हस्पिटल भर्ना
काठमाडाैं । अस्पतालमा शिशु छाडेको आरोपमा पक्राउ परेकी पूर्वसभासद् गायत्री साह अस्वस्थ भएपछि अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । गत…
फुटतर्फ विवेकशील साझा, रविन्द्र मिश्र र उज्वल थापाबीच ‘टसल’
काठमाडौं । वर्षमै विवेकशील साझा पार्टीमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । वैकल्पिक राजनीतिको नारा लिएर अघि बढेको यो…
काठमाडौं । चिनियाँ ७० प्रतिशत र स्वदेशी ३० प्रतिशत लगानीमा स्थापना भएको होङ्सी शिवम् सिमेन्ट उद्योगले आगामी जेठ दोस्रो…